Inona no fomba tsara indrindra hahazoana ny rindran-kira PR?
PR backlinks dia fantatry ny mpizarazara lavitra indrindra ho tena ilaina amin'ny ezaka Search Engine Marketing, ary koa ny paik'izy ireo ankapobeny amin'ny fananganana fifandraisana amin'ny fahasalamam-bahoaka miaraka amin'ny vondron'olona kinendry. Mazava ho azy fa maro ireo tetika manan-danja hafa entina hilalao mba hitarika mpitarika fifaninanana. Ny kalitao avoakan'ny PR kosa dia afaka mampiseho fahombiazana lehibe ho an'ny orinasanao, indrindra raha mifanaraka amin'ny SEO anao amin'ny teny fototra sy ny fampielezan-kevitra an-tserasera. Noho izany, andeha hojerentsika ny fomba ahafahantsika mahazo rindran-drakitra tena goavana amin'ny PR - tsy mandany fotoana sy vola be loatra.
Alohan'ny hanombohantsika - fanontaniana tokana monja. Nahoana ianao no tokony hifantoka amin'ny kalitao amin'ny backlinks PR? Satria ny kalitaon'ny backlinks dia manan-danja. Raha ny marina dia tsy maintsy mampifandray ny tranokalanao irery ihany izy ireo amin'ny pejy malaza sy azo atokisana indrindra amin'ny tranonkala manan-kaja manana fahefana ambony. Raha ny fandaharana Google no misy rohy iray miaraka amin'ny tranonkala malaza sy azo itokisana dia afaka matanjaka tsara ny mitondra ny valin'ny SEO, manangana ny fahatsiarovanao ny anaranao sy ny orinasa momba ny raharaham-barotra amin'ny fotoana iray ihany.
Fomba efatra mahay mandaha-peo PR
Manomboka ny vokatra avy amin'ny vokatra na ny serivisy mba hanehoana ny fahaizanao manam-pahaizana momba ny foto-kevitra. Azonao atao ihany koa ny mandeha ho an'ny fanamarihana fahatelo, eny fa na dia misy lohahevitra hafa aza, izay tsy dia mahafa-po tanteraka amin'ny sehatry ny indostria na ny tsenan'ny fivarotana - hiverina fotsiny ho an'ny rohy rehetra tafiditra ao amin'ny famerenana ny vokatra rehetra. Tadidio fa ny SEO dia tsy mitondra SEO tsara fotsiny fa manangana anarana marika tsara sy fanentanana momba ny tetikasanao an-tserasera.
Miasa bebe kokoa amin'ny famoronana votoaty ahafahana mampitombo ny haino aman-jery sosialy, fanamarihana ary fitarihana. Midika izany fa afaka misafidy ny ampahany amin'ny votoatin'ny pejy ara-tsoratra mahazatra anao ianao ao anaty zavatra hafa mahasoa sy manintona amin'ny mpihaino anao, toy ny finday, informatika, PDF, sns.Raha manao izany dia maro ireo hetsiky ny fiaraha-monina afaka mitondra rohy ankapobeny izay maneho ny fitohizan'ny tranonkala misimisy kokoa, ary noho izany dia manatsara kokoa ny fikarohana momba ny fikarohana.
Andramo ny fampakaram-bady, satria mbola mitoetra hatrany amin'ny fomba mavitrika indrindra ny hahazoana karazana TOP bakalorea avo lenta. Ny zavatra rehetra ilainao eto dia ny mandoa lahatsoratra tsy manan-tsahala sy manan-danja vitsivitsy - na amin'ny fotoananao, na ny vola lany amin'ny fananana ilay asa natokana ho an'ny mpanoratra matihanina matihanina. Ny fandefasana Guest dia hampitombo ny fahamendrehan'ny vahoaka sy ny maha-zava-dehibe ny tranonkalanao, hanome anao valiny mahavariana PR raha mifanaraka amin'ny tompona na tompona tranonkala ianao.
Mandray anjara mavitrika ny adihevitra ary mandray anjara amin'ny hetsika an-tserasera amin'ny alàlan'ny lahatsoratra toy ny lahatsoratra manodidina, fanadihadiana, fifampiraharahana mafana, na fizarana ho an'ny besinimaro miaraka amin'ny Questions & Answers dia mety hahazoana tombontsoa hafa amin'ny PR fanampiny. Ny ilainao dia ny manontany ny mpandaha-teny hifanakalozanao, ny mpanadinadina na ny mpanohitra mba hananganana rohy ao amin'ny tranonkalany manondro ny tranonkalanao manokana Source .